တောင်းဆိုမှုများကို YBOP မှတုန့်ပြန်မှု - David Ley မှတ်ချက်တွင် (၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီ) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn
ငါ Ley ရဲ့မှတ်ချက်သတိပေးခဲ့သည်နှင့်ဤချည်အပေါ်တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်ရန်တောင်းခဲ့သည်: အဆိုပါညျဒါဝိဒျ Ley မှတ်ချက် (posted ဇန်နဝါရီလ 30, 2016)။ ငါ၏အတုံ့ပြန်မှုပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရကတည်းကငါ YBOP အပေါ်ဗားရှင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ပိုမိုလွယ်ကူ post ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
David Ley ၏ပြောဆိုချက်ကိုကျွန်ုပ်မဖြေဆိုမီလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကထုတ်ဝေခဲ့သော porn အသုံးပြုသူများအားအာရုံကြောသိပ္ပံအခြေပြုလေ့လာမှု ၄၆ ခုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖော်ပြရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည် (ကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်အချို့၏စာပေနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ၂၅ ခု) ။ ယခုအချိန်အထိ“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, hormonal) တိုင်း၏ရလဒ်သည်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုအယူအဆကိုထောက်ခံသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများတွင်တွေ့ရသည့်အခြေခံကျသော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကိုအစီရင်ခံခြင်းအပြင်လေ့လာမှုအချို့အရ porn ကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ လိင်စိတ်ကိုလျော့ကျစေခြင်းနှင့် vanilla porn ၏ပုံရိပ်များကိုအာရုံကြောတုန့်ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ လက်ရှိ“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” ၏နောက်ဆုံးပေါ်စာရင်း ဒီမှာ။ လေ့လာမှု၏နာမတော်ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းကမူလစက္ကူစေပါတယ်။
ဤရွေ့ကား 46 လေ့လာမှုများကိုလည်းကျော်နှင့်အတူ align ၃၆၀ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု“ဦးနှောက် လေ့လာမှုများ” (ပေ, MRI, fMRI, EEG) ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်ချွင်းချက်မပါဘဲဤလေ့လာမှုများအတူတူပင်စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်းမှ neuroscience စာပေ၏ဤ 2015 ပြန်လည်သုံးသပ်ထောက်ပြအဖြစ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ, တကယ်တော့, အင်တာနက်စွဲလမ်းတဲ့မျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်သည်: "အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို"။
Update ကို, 2019: အကျိုးစီးပွားပictိပက္ခများ (COI) သည်ဒေးဗစ်လိုင်အတွက်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ရှေ့နေများကသူ့ကိုပေးသည် လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကို“ ဖျက်သိမ်း” ရန်၊ သူသည်လိင်နှင့် porn စွဲလမ်းမှု“ debunking” စာအုပ်နှစ်အုပ်ရောင်းချသည်။ သူက စကားပြောအခကြေးငွေစုဆောင်း လိင်နှင့် porn စွဲလမ်း "debunking" သည်။ ယနေ့အထိသူ၏အကျိုးစီးပွားအကျပ်အတည်းပြfinancialနာများအတွက်လီယာသည်သူ၏အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမြှင့်တင်ရန် (ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္myာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများအားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ Ley ဖြစ်ဆိုပါတယ် xHamster ဖောက်သည်ကိုပြောပြ အဘယ်အရာသည်“ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းခြင်း၊ camming နှင့်လိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းအမှန်အကန်ဖြစ်သည်။ ” ချစ်ခြင်းမေတ္တာပျံ့နှံ့စေခြင်း၊ porn porn ကုမ္ပဏီကြီး MindGeek မှပိုင်ဆိုင်သော Pornhub သည် Ley's 2016 နှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်နောက်ခံဖုံး ၅ ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ဒစ်များအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ Porn ။"
ဒေးဗစ် LEY"Viagra ကိုထွန်းလင်းပြီးနောက် ED သည်အမှန်တကယ်ပင် 90 -s များတွင်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး ၀ င်လာတဲ့ ED နှုန်းမြင့်တာကအသိအမှတ်ပြုတာကိုအရှက်ရစေတာပါ။
YBOP RESPONSE: အနိမ့်လိင်စိတ်: 2010 ကတည်းကငယ်ရွယ်အထီးလိင်အကဲဖြတ်လေ့လာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏သမိုင်းဝင်အဆင့်အသစ်တစ်ခုဘေး၏တုန်လှုပ်နှုန်းထားများသတင်းပို့ပါ။ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါဝင်သောဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူအတွက် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016) ။
2010 ကတည်းကဆယ်ပါးလေ့လာမှုများ: 2010 ကတည်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဆယ်ပါးလေ့လာမှုများ erectile အလုပ်မဖြစ်အတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖေါ်။ အနိမ့်လိင်စိတ်များအတွက်နှုန်းထားများ 10% ကနေ 40% အရွယ်ရှိနေစဉ် 14 လေ့လာမှုများမှာတော့ 37 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း, 16% ကနေ 37% မရသေးသည်လည်းရှိသည်။ နုပျို ED နှင့်ဆက်စပ်သောအဘယ်သူမျှမ variable ကိုကြေးဇူးတငျကွောငျးကနောက်ဆုံး 2006-10 နှစ်များတွင်ပြောင်းလဲသွားပြီ streaming porn (20) ၏ထွန်းကားထက်အခြား (ဆေးလိပ်သောက်နှုန်းကိုချဖြစ်ကြသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု 20 ကတည်းကတက်သာ 40%, အထီး 4-1999 အတွက်အဝလွန်နှုန်းတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည် - စာပေ၏ဤသုံးသပ်ချက်ကိုကြည့်ရှု) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်မကြာသေးမီခုန်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်အတူတိုက်ဆိုင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့် arousal မှ porn အသုံးပြုမှုနှင့် "porn စွဲ" ချိတ်ဆက်မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများ။
Ley တခါထပ်အဖြစ်ဘာမျှမကိုးကား, Viagra ၏နိဒါန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်လေ့လာမှုများအတွက်ယောက်ျားနောက်ဆုံးတော့အမှန်တရားပြောပြရန်ဦးဆောင်သူ၏ပြောဆိုချက်ကိုမပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုလည်းမရှိ။ ကျနော်တို့ ED ဆေးဘို့မိမိတို့ဆရာဝန်များလာရောက်လည်ပတ်ယောက်ျားတစ်ဦးတိုးအကြောင်းပြောနေတာကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါပညာရေးနှုန်းထားများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏လူဦးရေမှာကျယ်ပြန့်နှုန်းအပေါ် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုများ (များသောအားဖြင့်အမည်မဖော်စစ်တမ်းများ) ကိုသာရည်ညွှန်းသည်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, Ley 1948 နှင့် 2010 အကြားထုတ်ဝေတိုင်းတစ်ခုတည်းလေ့လာမှုမှာ, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်နိုင်ငံတွေထဲမှာ, အထီးသင်တန်းသားများကိုတသမတ်တည်းသူတို့ရဲ့ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာအကြောင်းကိုလိမ်ညာကြွေးကြော်နေပါတယ်။ ထိုအခါ 2010 အတွက် (Viagra စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် 13 နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်) အားလုံးလူပျိုတို့, သာလုလင်erectile လည်ပတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမည်မသိမေးခွန်းများဖြင့်အမှန်တရားကိုစတင်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဒါကစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပါတယ် Ley ၏ပြောဆိုချက်သည် Aspirin ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းကလေ့လာမှုတစ်ခုအရအသက်အုပ်စုတစ်စုအကြားခေါင်းကိုက်မှု ၁၀၀၀% တိုးစေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Viagra ကို ED ကန့်ကွက်ကြောင်းငြင်းဆိုသည့်အချက်များမှာ -
1) “ ထုတ်ဖော်ရန်စိတ်အားထက်သန်မှု” နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုချက်မှာဤတွင်မသက်ရောက်ပါ။ အဆိုပါ ED နှင့်အနိမ့်လိင်စိတ်နှုန်းထားများ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဘို့မိမိတို့ဆရာဝန်သွားရောက်လည်ပတ်ယောက်ျားများအတွက်နှုန်းထားများမဟုတ်။ အဲဒီအစား, ED နှင့်အနိမ့်လိင်စိတ်နှုန်းထားများအများအားဖြင့်ယောက်ျားလိင်စဉ်အတွင်း၎င်းတို့၏စိုက်ထူ၏အရည်အသွေးနှင့် arousal ဘယ်လောက်ရှိသလဲဘယ်မှာအမည်မသိစံချိန်စံညွှန်းမီမေးခွန်းအလုပ်သမားလေ့လာမှုများမှလာကြ၏။ Viagra စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပြောင်းလဲသွားမထားပါဘူး။
2) အဆိုပါပညာရေးအတွက်အဆမြင့်တက်ခြင်းနှင့်နိမ့်လိင်စိတ်နှုန်းထားများဖြစ်ပွားခဲ့သည် 40 အောက်မှာအမျိုးသားများတွင်သာ။ ဤသည်တစ်ခုတည်းက Ley ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုငြင်းဆိုသည်။
3) ဒီတစ်ချိန်တည်းကာလအတွင်းအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်တစ်ဦး concomitant တိုးရှိ၏။ 1992 ကနေအကြီးဆုံးအမေရိကန်လေ့လာမှု5အောက်မှာယောက်ျား၏ 40% အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးက 2014 ကနေဒါလေ့လာမှု 24-16 တစ်နှစ်ကြားရှိ၏ 21% အတွက်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကဖော်ပြခဲ့သည်!
တစ်ဦးက 2014 ခရိုအရှေယောက်ျား၏စစ်တမ်း 40 နှင့် 37% ၏အစီရင်ခံနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှုန်းထားများအောက်မှာ။
တနည်းကား, ဒီဟာတွေနဲ့ aligns 2015 လေ့လာချက် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ထက်မကအသုံးပြုသူ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြင်းပြမှုနည်းပါးကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြသည့်အီတလီအထက်တန်းကျောင်းသားအသက် (၁၈-၁၉) တို့အကြား။ ညစ်ညမ်းမှုမရှိသောသုံးစွဲသူများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှာ ၀ ရာခိုင်နှုန်းနိမ့်သည် (၁၈ နှစ်အရွယ်များတွင်မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့) ကဖော်ပြသည်။
4) ယနေ့ခေတ်လူငယ်များအတွက် ED နှုန်းသည်အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းမှုနည်းသောအရွယ်ရောက်သူများထက်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၂၀၁၄ ကနေဒါမှလေ့လာမှုအရအသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အတွင်းရှိအမျိုးသား ၅၃.၅% ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသနာများကိုပြသတဲ့လက္ခဏာများရှိသည်။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဟာအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ် (၂၇%)၊ အဲဒီနောက်မှာလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုနည်းတာ (၂၄%) နဲ့အော်ဂဇင် (2014%) ပြproblemsနာတွေကနောက်ဆက်တွဲဖြစ်တယ်။
အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု: ဤအမှုနှုန်းယောက်ျား 50-60 အပေါ်ကြီးမား 1992 လေ့လာမှုမှာ 18-60 တစ်နှစ်ကြားရှိများအတွက်အစီရင်ခံများထက်ပိုမိုမြင့်မားများမှာ!
5) Viagra ပြီးနောက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်လေ့လာမှုနှစ်ခုသည်လူငယ်များတွင် ED နှုန်းတိုးနှုန်းကိုတင်ပြခဲ့သည်။ Viagra ကြော်ငြာတွေကယောက်ျားတွေမှာ ED ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်တော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေထက်အများကြီးပိုမြင့်တာကိုငါတို့မမြင်နိုင်ဘူးလား။ ဤရွေ့ကားတူညီသောမေးခွန်းလွှာ (GSSAB) ကိုအသုံးပြု။ အတူတူဥရောပတိုင်းပြည်များ၏လေ့လာမှုများခဲ့ကြသည်။ အဲဒီအစားလူငယ်များနှုန်းယခုပုံမှန်မဟုတ်သောမြင့်မားသည်။
လူတို့သညျအဘို့ 2001-2002 ED နှုန်းထားများ 40-80 အကြောင်းကိုခဲ့ကြသည် 13% ဥရောပမှာ။
2011 အသုံးပြုပုံ ED နှုန်းထားများအတွက် လူငယ် ဥရောပတိုက်သား, 18-40, အရွယ်ရှိထံမှ 14-28% ။
6) သာမန်အသိ - ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကလူငယ်တစ် ဦး ထက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကြုံတွေ့ရသောအခါယနေ့လူငယ်တစ် ဦး သည် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကြုံတွေ့ရသောအခါရှက်ရွံ့ခြင်း၊ ရှက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုနိုင်သောအထောက်အထားလုံးဝမရှိပါ။ အမည်မသိ မေးခွန်း) ။
ဒေးဗစ် LEY: "လိင်စွဲလမ်းရာမှ porn စွဲခွဲခြားဖို့ကြိုးစားမှု porn စွဲ၏ယုံကြည်သူများအတွက်ဘုံ trope ဖြစ်ပါသည်။ "
RESPONSE: ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုလိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပေါင်းသင်းရန်ကြိုးစားခြင်းသည် Dr. Ley ၏ဘုံနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။ Tiger Woods နှင့် Bill Clinton တို့ကိုဖယ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ယနေ့လူငယ်များစွာသည်သူတို့၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုခိုင်မာသော streaming ဗီဒီယိုများကြည့်နေစဉ်လျစ်လျူရှုထားခြင်းနှင့်လိင်မကြိုးစားမီနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တစ် ဦး တည်းထိုင်ကြည့်ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့် surfing လိင်မဟုတ်ပါဘူး။ အများစုမှာအပျိုစင်များဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ညစ်ညမ်းသော streaming များအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် (ED နှုန်းသည်ယခုအသက် ၄၀ နှစ်အောက်အမျိုးသားများအတွက် ၁၄-၃၃% ဖြစ်သည်) ငါငါတို့ဆောင်းပါးအကြံပြု - Porn စွဲလိင်စွဲလမ်းသည်မဟုတ် - အဘယ်ကြောင့်အရေးပါ
ဒေးဗစ် LEY: "ကံမကောင်းစွာပဲသူတို့ရဲ့အမှန်တကယ်အငြင်းအခုံကစွဲလမ်းသောအညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖြစ်ပါတယ် - porn စားသုံးမှုလွှမ်းမိုးသောအများစုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကပါဝင်ပတ်သက်။ "
RESPONSE: nice ပါ။ တိုင်းလေ့လာမှုကိုးကား porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည် YBOP ကဒီမှာဖြေရှင်းရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည့်ဒေါက်တာ Ley ၏အခြားဘုံနည်းဗျူဟာသည်: Sexologists တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟုဆိုကာခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ငြင်းပယ်ပြဿနာ (2016) ဖြစ်ပါသည် သူသည်လိမ္မာပါးနပ်စွာပြောဆိုခြင်းကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှဖယ်ရှားရန်လိမ္မာပါးနပ်စွာကြိုးစားသည်။ သူကဒါကိုလုပ်ပြီး Kellogg၊ အရှက်ရခြင်း၊ ဘာသာရေး၊ လိင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းစတဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့နေရာမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဟာ ED ကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။ ကိုးကားထားသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး Dr. Ley, ခေါင်းစဉ်နဲ့နေပါ။ ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသရန်ဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးသားများသည်လိင်မှု၊ ပျော်စရာကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံလိုခြင်းနှင့်အများစုမှာလက်မထပ်ရသေးသူများဖြစ်သည်။
RESPONSE: Dr. Ley, porn / sex စွဲလမ်းမှုအတွက်သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အပံ့မရှိကြောင်းသင်ဘာကြောင့်အမြဲပြောနေရတာလဲ 46 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, Neurospychology, Hormonal) သည်စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုအားကောင်းကောင်းပံ့ပိုးပေးနေသလား။ သင်သည်အာရုံကြောသိပ္ပံ၏လက်ရှိအခြေအနေကိုမသိဘဲဖြစ်စေ၊ ၎င်းကိုတမင်တကာလျစ်လျူရှုသောအခါဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့မည်သို့အလေးအနက်ထားသင့်သနည်း။ အာရုံကြောလေ့လာမှု ၄၆ ခုအပြင်
တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကို? 2018, ကမ္ဘာ့အများဆုံးအသုံးများဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေ manual ၏အဖြစ်, ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "
ဒေးဗစ် LEY: "အဘယ်အရာကိုသူတို့ကယ့်ကိုသရုပ်ပြဟန်ပိုမိုမြင့်မားလိင်စိတ်နှင့်အဆင့်မြင့်အာရုံ-ရှာနှင့်အတူလူ Pre-တည်ဆဲအာရုံကြောဝိသေသလက္ခဏာများ၏ရလဒ်အဖြစ်, သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုကိုဦးတည် gravitate သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ "
RESPONSE: ဒီငြီးငွေ့ဖွယ်လိင်တူချင်းဆက်ဆံမှုဟာလိင်စိတ်စွဲလမ်းမှုနဲ့လိင်စိတ်စွဲလမ်းမှုမြင့်တက်လာတာထက်မပိုပါဘူး။ အဲဒီလောက် .... ရှိပြီ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အဆိုပါ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေများတွင်မှားယွင်းစေရန်လုပ်ဆောင်ခြင်း.
Ley's တွင်“ မြင့်မားသောလိင်စိတ်နိုးထမှု” ပြောဆိုချက်ကိုသင်မြင်ဖူးကောင်းမြင်ဖူးလိမ့်မည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် မှတ်မိလွယ်တဲ့ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူ blog post: "သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်။ Ley ၏ ၃ နှစ်အရွယ် blog post သည် YBOP နောက်ကွယ်ရှိသိပ္ပံပညာနှင့်သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းအစား၎င်းသည် EEG လေ့လာမှုတစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီး၎င်းကို ဦး ဆောင်ရေးသားသူ Nicole Prause ဖြစ်သည်။ Ley နှင့် Prause နှစ် ဦး စလုံးလေ့လာမှု၏ (Steele et al။ ၂၀၁၃) တွေ့ရှိချက်များအရ porn / sex စွဲလမ်းမှုသည်မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းဖြစ်သည်ဟုအရိပ်လက္ခဏာကိုထောက်ခံသည်။
, Ley နှင့်နီကိုးလ် Prause နေဖြင့်တောင်းဆိုမှုများဆန့်ကျင် စတီး et al ။, 2013 တနာတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဘို့နည်းအလိုဆန္ဒနှင့်အတူ correlating porn ပိုမို cue-reactivity ကို (ပိုမိုမြင့်မား EEG) သတင်းပေးပို့ (သို့သော်ညစ်ညမ်းမှ masturbate မှအလိုဆန္ဒကိုလျှော့ချမပါ)။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် porn ပိုဦးနှောက်ကို Activation နှင့်မတရားသောနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံကျော် porn မှ masturbating ပိုမိုနှစ်သက်.
အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အနိမ့်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူ coupled porn ပိုမို cue-reactivity ကိုပု aligns 2014 ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်ကိုလေ့လာမှု porn စွဲပေါ်မှာ။ ၏အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်များ စတီး et al။ , 2013 သည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှမတူကွဲပြားသောခေါင်းစီးများနှင့် Ley ၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်အခိုင်အမာပြောဆိုချက်များနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ နောက်ဆက်တွဲသက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများ 8 ကပြောသည် သံမဏိ et al။ တွေ့ရှိချက်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းစေသောပုံစံကိုထောက်ခံသည် (“ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒ” အယူအဆနှင့်ဆန့်ကျင်သည်): ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013
2015 မှာတော့နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဒုတိယ EEG လေ့လာမှု, ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ "porn စွဲ" အတွက် (နေဆဲပုံရိပ်တွေကိုမှအကျဉ်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူ) နည်းအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့ရာ။ ဤသည်ညစ်ညမ်းစွဲအတွက်သညျ့လျှော့ဆန္ဒ၏သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat (၂၀၁၄), vanilla ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့်ပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲသူများ” သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအလွန်မြင့်မားစွာဖြတ်ကျော်လိုစိတ်ကိုမလိုလားသောကြောင့်ဖြစ်သည် သာ. ကြီး Non-စွဲကိုဖွင့်ခံရဖို့ထက်ဆွ (9 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများသဘောမတူ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015)
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် Prause ၏ဒုတိယ EEG လေ့လာမှု၏ရလဒ်သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနည်းပါးသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောဆန္ဒမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့, နီကိုးလ် Prause ဒီတွင်ဖော်ပြထားသည် Quora post ကို သူမသည်လိင်စွဲလမ်းသူများ၌မြင့်မားသော libidos များရှိသည်ဟုမယုံကြည်တော့ကြောင်း -
Prause ကိုလှန်လှောကြည့်လိုက်သောအခါ“ porn / sex စွဲ = မြင့်မားသောလိင်စိတ်စွဲလမ်းမှု” ဆိုသောပြောဆိုမှုများအတွက် Ley ၏ထောက်ခံမှုသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုများစွာသည်မှားယွင်း။ မှားယွင်းသောစမ်းသပ်မှုများဖြစ်ပြီးဒေးဗစ်လေဒီ၏“ လိင်စိတ်နိုးထမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ လိင်၊
CSB ဘာသာရပ်များကြောင်းအစီရင်ခံ အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ် လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများ ... .. အမျိုးသမီးများနှင့်ကာယပိုင်းဆက်ဆံမှုများတွင်အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာနှင့်မပတ်သက်ပါကလျော့နည်းသွားသောလိင်စိတ်ဆိုင်ရာလိင်စိတ်နည်းခြင်း ...
5) "ဥရောပနိုင်ငံနှစ်ခုမှစုံတွဲများအကြားတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ပျင်းခြင်းနှင့်လိင်စိတ်ကွဲပြားခြင်း” (2015) - ဒီစစ်တမ်းက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် hypersexuality ၏အစီအမံများအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
6) "မြီးကောင်ပေါက်နဲ့ web porn: လိင်၏ခေတ်သစ်တစ်ခု (2015)"- ဒီအီတလီလေ့လာမှု urology ပါမောက္ခကပူးတွဲရေးသားအထက်တန်းကျောင်းအပေါ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ် Carlo Foresta, မျိုးဆက်ပွား Pathophysiology ၏အီတလီ Society ၏ဥက္ကဋ္ဌ။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတွေ့ရှိချက် (တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်းလောင်သောသူတို့အဘို့နှင့် 16%) Non-စားသုံးသူအတွက် 0% နှင့်နှိုင်းယှဉ်တစ်ပါတ်အစီရင်ခံစာသညျ့အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတစ်ကြိမ်ထက် porn ကိုပိုလောင်သောသူတို့၏အမျိုးအကြောင်း 6% ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုမှ:
ပါဝင်သူများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲတာကိုများများတွေ့လေလေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်စေဖို့လက်ဝဲ Putamen များ၌ BOLD တုံ့ပြန်မှုနည်းလေလေဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်နာရီပေါင်းများစွာသည် striatum ရှိမီးခိုးရောင်အမှုန်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုတွေ့ရှိရပြီး၊ မှန်မှန်ကန်ကန် ventral putamen သို့ရောက်ရှိသည်။ ဦး နှောက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပမာဏဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုအာရုံမခံစားဘဲခံယူပြီးနောက်သည်းခံမှုရဲ့ရလဒ်ကိုထင်ဟပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပါတယ်။
ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည်) 2013: ဖယ်စာနယ်ဇင်းများတွင်အများအပြားကလက်ခံတောင်းဆိုမှုများကနေ, အဲဒါကိုအလေးအနက်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရအဖြစ် Prause ရဲ့ 1 ကြက်ဥလေ့လာမှု, peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လွန်ကြောင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းရဲ့ သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော (အထီး, အမြိုးသမီး, Non-လိင်ကွဲ); 2) ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည် စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်စှဲအဘို့အပြမရ; 3) လေ့လာမှုခဲ့ နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စု; 4) မေးခွန်းခဲ့ကြသည် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲဘို့အတည်ပြုမပေး. အယ်လ်မှာသံမဏိ။ အလွန်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အထက်ဖော်ပြပါစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်ချက် ၂၄ ခုမှ ၄ ခုသာရှိသည် ကဖော်ပြနှောင့်အယှက်နှစ်ခုတစ်ဖက် (စွဲလမ်း၏အရိပ်လက္ခဏာ) နဲ့လိင်အဘို့လျော့နည်းအလိုဆန္ဒနှင့်အတူ cue-reactivity ကို correlating အဖြစ်ကိုးကားစဉ်နှစ်ခု, လက်မခံနိုင် junk သိပ္ပံအဖြစ် critiquing ။
၏အဖြစ်မှန်မှာတော့တွေ့ရှိချက် Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat ကို (2014), အရာထက်ပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Prause et al။ တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းနှင့်အတူ align BANCA et al ။ 2015 သောဤစာရင်းထဲတွင် #13 ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အခြား EEG လေ့လာမှု အမြိုးသမီးမြားတှငျပိုမို porn အသုံးပြုမှုကို porn မှ ဦး နှောက် activation နှင့်ဆက်နွယ်သောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ EEG နိမ့်ဖတ်ခြင်းကဘာသာရပ်များသည်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် vanilla porn ၏ငြိမ်သက်သောပုံရိပ်များကိုအထင်မသေးပါ။ သူတို့က (လေ့သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။ ကိုး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများဒီလေ့လာမှုအမှန်တကယ်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကို (စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီ) တွင် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
Prause (သူမ၏ EEG ဖတ် "cue-reactivity ကို" အကဲဖြတ်ကြောင်းတရားကိုဟောပြောာင်း), အစားလေ့ထက်။ Prause မှန်ကန်သောခဲ့ကြသည်ရင်တောင်သူမအဆင်ပြေသူမ၏ "မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု" အခိုင်အမာအတွက် gaping ပေါက်လျစ်လျူရှု: ရင်တောင် Prause et al ။ 2015 မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လျော့နည်း cue-reactivity ကိုတွေ့ရှိခဲ့ဖူး, 24 သည်အခြားအာရုံကြောလေ့လာမှုများ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် cue-reactivity ကိုသို့မဟုတ်မတရားသော (ထိခိုက်လွယ်) သတင်းပေးပို့ကြပြီ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21။ , 22, 23, 24။ သိပ္ပံလေးနက်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုအားဖြင့်မလွယ်ကူသည့်တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုနှင့်အတူမသွားဘူး, သိပ္ပံသင်မဟုတ်လျှင် (သက်သေအထောက်အထား၏သဘောအရဆိုလျှင်အတူသွား အစီအစဉ်-မောင်းနှင်နေကြသည်).
တစ်ဦးတည်းသာမိတ်ဖက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောဘယ်မှာစုံတွဲများအတွက်ကျနော်တို့ arousal နှင့်ဆက်စပ်သောပိုပြီးပြဿနာများ (အထီး) နှင့်အနုတ်လက္ခဏာ (အမျိုးသမီး) Self-အမြင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
မကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အမျိုးသားများအနက် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသည်။ ဘက်ပေါင်းစုံအကဲဖြတ်မှုတစ်ခုအရလိင်စိတ်ပျံ့လွင့်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်စုံတွဲသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလျော့နည်းသွားစေသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုခဲ့ကြသော [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလျော့နည်းလာသော] အမျိုးသားများအနက် (၂၁.၁) ရာခိုင်နှုန်းသည်သူတို့၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ယောက်ျား ၂၆.၇% ကသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏လိင်ဆက်ဆံမှုကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေပြီး ၂၁.၁% ကညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားရပ်တန့်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းဖြတ်ပြီးအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု Dimension PCES အဘို့အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ကြ၏ သို့သော်အဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်း Porn အသုံးပြုသူများအနိမျ့ကြိမ်နှုန်း Porn အသုံးပြုသူများထက် သာ. ကြီးမြတ်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံရှိရာလိင်အသက်ကို subscale အပေါ်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏။
18) အထီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2016) - ပြင်သစ်စိတ်ပညာရှင်၏လက်ရှိဥက္ကpresident္ဌဖြစ်သည် Sexology ၏ဥရောပအဖွဲ့ချုပ်။ စိတ္တဇသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအကြားအပြန်အလှန်ပြောင်းလဲနေစဉ်၊ သူသည်အများအားဖြင့်လိင် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (erectile dysfunction and anorgasmia) ကိုရည်ညွှန်းသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ် anorgasmia နှင့်သူတို့ကိုကူညီဖို့သူ၏ကုထုံးချဉ်းကပ်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးသူကို 35 လူတို့နှင့်အတူသူ၏စာတမ်းသည်သူ၏လက်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံသည်။ စာရေးသူကသူ၏လူနာအများစုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသုံးခဲ့ကြပြီး၊ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ပြpornနာများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည် (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကနာတာရှည် ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေတာမဟုတ်ဘဲ၎င်းကို ED ၏အကြောင်းတရားအဖြစ်ဘယ်တော့မှမပေးကြောင်းသတိရပါ) ။ ကောက်နုတ်ချက်များ
မိတ်ဆက်ခြင်း: ကျယ်ပြန့်ကျင့်သုံးသည်သူ၏ထုံးစံအတိုင်း form မှာအန္တရာယ်ကင်းနှင့်ပင်အထောက်အကူဖြစ်စေ၎င်း၏အလွန်အကျွံနှင့် Pre-ထင်ပေါ်ကျော်ကြား form မှာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းစွဲယနေ့ဆက်စပ်လွန်းမကြာခဏကသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏လက်တွေ့အကဲဖြတ်အတွက်သတိမမူဖြစ်ပါတယ်။
ရလဒ်များ - ဒီလူနာတွေအတွက်ကန ဦး ရလဒ်တွေ၊ သူတို့ရဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုစွဲလမ်းမှုတွေကို“ နားမလည်” ဖို့ကုသမှုကအားရှိစေပြီးအားသစ်လောင်းပေးပါတယ်။ ၃၅ ယောက်ထဲက ၁၉ ယောက်မှာရောဂါလက္ခဏာပြမှုလျော့နည်းသွားတယ်။ ကမောက်ကမဖြစ်မှုက regressed ဖြစ်ပြီးဒီလူနာတွေကကျေနပ်လောက်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံစားနိုင်ခဲ့တယ်။
“ ဘာသာရပ်များနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းကအချို့သောသူတို့ထဲတွင် erotica နှင့်ထိတွေ့မှုအလွန်မြင့်မားခြင်းက vanilla sex” erotica နှင့်တုန့်ပြန်မှုအသစ်လိုအပ်ခြင်းနှင့်အချို့သောလိုအပ်ချက်များနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းထင်မြင်ချက်ကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ နှိုးဆွနိုင်ရန်အတွက်အထူးလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများ။ "
"ဒီလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် OSAs တွင်ပြproblemနာပါ ၀ င်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ ရလဒ်များအရပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်နိမ့်သော Erectile function များသည်ပြproblemနာရှိသော OSAs (အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ) နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဤရလဒ်များသည်လိင်စွဲလမ်းမှုလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်မှုမြင့်မားသောနှိုးဆွနိုင်သည့်အဆင့်ကိုအစီရင်ခံခဲ့သည့်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည် (Bancroft & Vukadinovic, 2004; Laier et al ။ , 2013; Muise et al ။ , 2013) ။ ”
"၄၉ ရာခိုင်နှုန်းကအနည်းဆုံးတစ်ခါတစ်ရံတွင်လိင်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေခြင်း၊ ယခင်ကသူတို့အတွက်စိတ်မ ၀ င်စားမှုမရှိသောသို့မဟုတ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအရာများဖြစ်သည့် OSAs တွင်ပါဝင်ခြင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ၆၁.၇% ကအနည်းဆုံးတစ်ခါတစ်ရံတွင် OSAs များသည်ရှက်ဖွယ်ကောင်းသောသို့မဟုတ်အပြစ်ရှိသည့်ခံစားချက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်"
မှတ်ချက်။ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုသုံးစွဲမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပထမဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်သည်။ porn အသုံးပြုမှုနှင့် erectile လုပ်ဆောင်မှုအကြားဆက်စပ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီဟုဆိုကာအခြားလေ့လာမှုများနှစ်ခုသည်အစောပိုင်းလေ့လာမှုများမှ porn-induced ED ကိုဖြိုခွဲရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာပေများတွင်ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည် - စက္ကူ ၁ သည်အစစ်အမှန်လေ့လာမှုမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရှုံ့; စက္ကူ2အမှန်တကယ်ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ porn - သွေးဆောင် ED ကိုထောကျပံ့ပေး။ ထို့အပြင်စက္ကူ ၂ သည်“ အတိုချုပ်ဆက်သွယ်မှု” သာဖြစ်သည် အရေးကြီးသောဒေတာသတင်းပို့ဘူး.
21) ပြောင်းလဲအစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု (2016) -“ အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ” (CSB) သည်ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းစွဲသူများဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ တစ်ပတ်ကို ၂၉ မိနစ်ခန့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်မှာ CSB ဘာသာရပ် ၂၀ မှ ၃ ခုသည်အင်တာဗျူးသူများကို“ အော်ဂဇင် - စိုက်ထူခြင်းရောဂါ” ခံစားခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုမှန်ကန်သောလိင်မှုကိစ္စများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်သက်သောလူငယ်များသည်အခွင့်အလမ်းရသောအခါအခြားသူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်မတတ်စွမ်းနိုင်သည့်ထောင်ချောက်ထဲရောက်သွားနိုင်သည်ဟုလေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုကဖော်ပြသည်။ ဘော်စတွန်ရှိအမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်သောကြာနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရအပြာ - ယောက်ျားစွဲ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပိုမိုခံစားရနိုင်ပြီးလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကျေနပ်မှုနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
ကျနော်တို့အောင်းနေချိန် SEM ထိတွေ့ခြင်းမှထိတွေ့မှု SEM ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမယ်လို့တွေးဆ။ လေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်ထောက်ခံနှင့်အောင်းနေချိန် SEM ထိတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ SEM အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာခန့်မှန်းခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်အောင်းနေချိန်ကာလအတွင်း SEM ထိတွေ့သူတစ်ဦးချင်းစီ, လူကြီးသို့ဤအပြုအမူများဆက်လက်စေခြင်းငှါအကြံပြုသည်။ လေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်များကိုလည်းအောင်းနေချိန် SEM ထိတွေ့အရွယ်ရောက်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတစ်သိသိသာသာခန့်မှန်းခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။
ဒေးဗစ် LEY: "အဘယ်သူမျှမကြောင်းကျိုးဆက်စပ် porn ထိုကဲ့သို့သောရုပ်မြင်သံကြားသို့မဟုတ်လိုလားသူအားကစားအဖြစ်ဖျော်ဖြေရေး၏အခြားပုံစံများအနေဖြင့်ကွဲပြားသောအဘယ်သူအားမျှဆက်ဆက်မဆိုဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုညွှန်ပြ, သရုပ်ပြခဲ့သည်။"
RESPONSE: ဒီတစ်ခုဝါကျတစ်ဦးလေးနက်သုတေသနဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနှင့်ဆက်စပ်သောအသိပညာမရှိခြင်းနှင့်စွဲလမ်း (ငါ၏အလာမယ့်အဖြေကိုပိုမို) တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများအဝိဇ္ဇာပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး သည်“ အကြောင်းပြချက်မရှိကြောင်းသက်သေပြခြင်း” ကိုအသုံးပြုသောအခါနားထောင်ခြင်းသိပ္ပံပညာရှင်များသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏သိပ္ပံပညာနှင့်သုတေသနအပေါ်အခြေခံနားလည်မှုကိုသံသယဖြစ်စေသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အနည်းငယ်သာသုတေသနပြုခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အဆုတ်ကင်ဆာနှင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းစပ်ကြားလေ့လာမှုအားလုံးသည်ဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်းအကြောင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာရှင်းပါသည်။
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုအလငျး၌သုတေသီများများသောအားဖြင့်ဆောက်လုပ်ထံမှ precluded နေကြတယ် စမ်းသပ်ဆဲ ညစ်ညမ်းအချို့ပျက်ဆီးဖြစ်ပေါ်စေသည်သက်သေပြမယ်လို့ထားတဲ့သုတေသနဒီဇိုင်းများ။ ထို့ကြောင့်သူတို့အစားအသုံးပြုရမည် ဆက်စပ်မှု မော်ဒယ်များ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသိပ္ပံနည်းကျဆက်စပ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုမည်သည့်သုတေသနareaရိယာတွင်မဆိုစုဆောင်းမိသောအခါသက်သေအထောက်အထားများကိုစမ်းသပ်လေ့လာမှုများမရှိသော်လည်းသီအိုရီတစ်ခုအားသက်သေပြရန်ပြောနိုင်သည့်အချက်တစ်ခုပေါ်လာသည်။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင်ဆက်စပ်studyရိယာလေ့လာမှုတစ်ခုကလေ့လာမှုinရိယာထဲမှာ "ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သေနတ်" ကိုမပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်များစွာသောဆက်စပ်မှုလေ့လာမှုများရဲ့သက်သေအထောက်အထားများကိုသက်သေပြရန်အသုံးပြုသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုတိုင်းနီးပါးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုကိုသက်သေပြရန်အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှာသင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာနှစ်ခုအနက်တစ်ခုမှာ -
ကလေးမွေးဖွားမှာကွဲကွာအမွှာနှစ်ယောက်တို့ကြီးမားသောအုပျစုရှိသည်။ တဦးတည်းအုပ်စုတစ်စု porn ကိုချောင်းမြောင်းဘယ်တော့မှသေချာအောင်လုပ်ပါ။ အခြားအုပ်စုတိုင်းတစ်ဦးချင်းစီအတိအကျတူညီနာရီ porn ၏အတိအကျအမျိုးအစားတူ, နှင့်အတိအကျတူညီအသက်အရွယ်ကိုချောင်းမြောင်းကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ခြားနားချက်များ၏အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 30 နှစ်သို့မဟုတ်ဒါများအတွက်စမ်းသပ်မှု, Continue ။
အဘယ်သူ၏သက်ရောက်မှုကိုသင်တိုင်းတာရန်လို variable ကိုဖယ်ရှားပစ်။ အထူးသ porn အသုံးပြုသူများကိုရပ်တန့်လျက်, အပြောင်းအလဲများကိုလအတွင်းအကဲဖြတ်ရန် (နှစ်ပေါင်း?) အကြာတွင်ရှိသည်။ ဤသည်လုလင်တို့ကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ (porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့) နာတာရှည် Non-အော်ဂဲနစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသက်သာစေနိုင်ကြောင်းတစ်လမ်းအဖြစ် porn ကိုရပ်တန့်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။
ဒီရက်စွဲကိုသာ 8 လေ့လာမှုများ porn ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ရလဒ်ရှုလေ့လာကြသည်။ အားလုံး 8 သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းဖြတ်ခြင်းဖြင့်ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ်သူတွေကိုလေ့လာမှုငါးခု causation သရုပ်ပြခဲ့သည်။
(2015) ဝညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်နှောင့်နှေး: လက်ရှိပျော်ရွှင်မှုအဘို့အနောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်များအရောင်းအဝယ်ဖြစ် - ဤလေ့လာမှု သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးစေရန်လျော့နည်းနိုင်စွမ်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသီများတစ်လအကြာမှာ porn အသုံးပြုသူများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆက်လက် porn အသုံးပြုမှုဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးစေရန်လျော့နည်းနိုင်စွမ်းဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သုတေသီများ2အုပ်စုများသို့ဘာသာရပ်များကိုခှဲဝေ: တစ်ဝက်သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာကနေရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားခဲ့; ဝက် porn ကြဉ်ရှောင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူတို့ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အပေါ်အများကြီးပိုကောင်းသွင်းယူ: porn အတွေ့အကြုံကနေကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သူဘာသာရပ်များ။ အဆိုပါလေ့လာမှု said:
"ဒီတွေ့ရှိချက်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကွဲပြားခြားနားသည်အခြားသဘာဝကဆုလာဘ်ထက်ဝနှောင့်နှေးစေတယ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချသောဆုဖြစ်၏ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒါဟာထူးခြားတဲ့ဆုလာဘ်အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု, Impulse နှင့်စွဲလေ့လာမှုများအဖြစ်ညစ်ညမ်းဆက်ဆံဖို့နှင့်တစ်ဦးချင်းအဖြစ် relational ကုသမှုအညီဒီလျှောက်ထားရန်ထို့ကြောင့်အရေးကြီးပါတယ်။ "
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့် One ရဲ့ Romantic Partner (2012) ကိုအားနည်းစေကတိသစ္စာ: နောက်ဆုံးမဟုတ်ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကမေတ္တာ - အဆိုပါလေ့လာမှုဘာသာရပ်3ပတ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရသည်။ ယင်းအုပ်စုနှစ်စုနှိုငျးယှဉျညစ်ညမ်းသုံးပြီးဆက်လက်တဲ့သူတွေကိုထိန်းချုပ်သင်တန်းသားများကိုထက်ကတိကဝတ်၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လုလင်တို့သည် (2014) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတစ်ခု etiological အချက်အဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သော masturbatory အလေ့အကျင့် - porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (အနိမ့်လိင်စိတ်, fetishes, anorgasmia) နဲ့လူတပေါ်မှာဤဆောင်းပါးအစီရင်ခံစာများတွင်4ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်တစ်ခုမှာ။ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေ 6-ရက်သတ္တပတ် abstinence များအတွက်လို့ခေါ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။ 8 လကြာပြီးတဲ့နောက်လူကိုတိုးချဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အောင်မြင်သောလိင်နှင့်အော်ဂဇင်နှင့် "ကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ခံစားသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အခွအေနေ Psychogenic Anejaculation: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု (2014) - အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ညစ်ညမ်းစေသောညစ်ညမ်းမှုကိုဖော်ပြသည်။ လက်မထပ်မီခင်ပွန်းသည်၏တစ်ခုတည်းသောလိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ သူကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းထက်လိင်စိတ်စူးစူးဝါးဝါးမှုနည်းသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်၏အဓိကအပိုင်းမှာ "ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်း" နှင့်စိတ်ကိုကုထုံးသည်သူ၏ anejaculation ကိုကုသရန်ပျက်ကွက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဲဒီလို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွေမအောင်မြင်တဲ့အခါ၊ နောက်ဆုံးတွင်ဤတားမြစ်ချက်သည်သူ၏ဘ ၀ တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လက်တွဲဖော်နှင့်အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်သန္ဓေတည်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါ ၀ င်သော၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည်လူငယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမြင့်တက်လာမှုကိုဖော်ပြသည့်နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်သောအမျိုးသားများနှင့်ပတ်သက်သောဆေးမှတ်တမ်း ၃ ခုသည်ဆရာဝန်များကတင်ပြသည်။ အမျိုးသားသုံး ဦး အနက်နှစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြdနာများကိုကုသပေးခဲ့သည်။ တတိယလူသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်
အထီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2016) - ပြင်သစ်စိတ်ပညာရှင်၏လက်ရှိဥက္ကpresident္ဌဖြစ်သည် Sexology ၏ဥရောပအဖွဲ့ချုပ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအကြားစိတ္တဇပြောင်းလဲခြင်းသည်အများအားဖြင့်သူသည်အများအားဖြင့်လိင် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (erectile dysfunction and anorgasmia) ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ် anorgasmia နှင့်သူတို့ကိုကူညီဖို့သူ၏ကုထုံးချဉ်းကပ်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးသူကို 35 လူတို့နှင့်အတူသူ၏စာတမ်းသည်သူ၏လက်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံသည်။ စာရေးသူကသူ၏လူနာအများစုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသုံးခဲ့ကြပြီး၊ ပြabstractနာ၏အဓိကအကြောင်းရင်းသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုပပျောက်စေခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသား ၃၅ ယောက်အနက် ၁၉ ယောက်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပြန်လည်သက်သာစေခဲ့သည်။ ကျန်တဲ့အမျိုးသား ၁၆ ယောက်ကကုထုံးကိုရပ်လိုက်တယ်။
ကရေတိုရေရှည် psychosexual မော်ဒယ်အတွင်းနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လိုခက်ခဲပါသလဲ တစ်ဦးကအမှုလေ့လာမှုနှိုင်းယှဉ် (2017) - နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှု (anorgasmia) အတွက်အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသမှုများကိုသရုပ်ဖော်ထားသော“ ပေါင်းစပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု” နှစ်ခုပါသည့်အစီရင်ခံစာ။ “ လူနာ B” သည်ကုထုံးဖြင့်ကုသသောလူငယ်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာမှာစာတမ်းကလူနာ B ၏“ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ခက်ခဲသောအရာများအဖြစ်သို့ရောက်သွားသည်” ဟုဖော်ပြသည်၊ စာတမ်းကညစ်ညမ်းနှေးကွေးသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်အဆန်းမဟုတ်၊ လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှု၏ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုလေ့လာရန်စာရေးသူမှတောင်းဆိုထားသည်။ ၁၀ ပတ်ကြာညစ်ညမ်းမှုမရှိသောလူနာဘီ၏ကြာရှည်သုက်လွှတ်မှုကိုကုသပေးခဲ့သည်။
Abstinence Preferences ကို (2016) ထင်သလောက်ဘယ်လို [ပဏာမရလဒ်များ] - ဒုတိယလှိုင်း၏ရလဒ်များ - အဓိကတွေ့ရှိချက်များ
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှ -Abstaining ဆုလာဘ်နှောင့်နှေးနိုင်စွမ်းကိုတိုးပွားစေ
abstinence တစ်ကာလအတွင်း -Participating အန္တရာယ်များကိုယူလူတွေကိုပိုပြီးဆန္ဒရှိပြန်ဆို
-Abstinence လူတွေကိုပိုပြီး extroverted ပိုပြီးအသိစိတ်နှင့်လျော့နည်း neurotic ပြန်ဆို
အထက်ပါ“ variable ကိုဖယ်ရှားခြင်း” လေ့လာမှုများအပြင်၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းကိုသရုပ်ပြသည့်လေ့လာမှု ၇၀ ကျော် ဖြစ်စေတဲ့ အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကို.
စွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသည်အခြားဖျော်ဖြေရေးပုံစံများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြောင်းလဲမှုများနှင့်မတူကြောင်း Ley ၏ပြောဆိုချက်သည်အလွန်အမင်းကြောက်စရာပင်။ အဖြစ်မှန်၌စွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသည်“ Gilligan's ကျွန်း” ကိုကြည့်ရှုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြောင်းလဲမှုများနှင့်များစွာကွာခြားသည်။ အဖြစ်မှန် - စွဲလမ်းမှုယန္တရားကိုနှစ် ၆၀ နီးပါးလေ့လာခဲ့သည်။ စွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလွန်တိကျတဲ့ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများမှဆင်းသက်လာသည် ဆယ်လူလာ, ပရိုတိန်းနှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအဆင့်ဆင့်။ ဤရွေ့ကား ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအတူတကွအဖြစ်လူသိများအပြုအမူနှင့်အတူထပ်ခါထပ်ခါဆက်စပ်ပါပြီ "စွဲ phenotype ။ " စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများကိုတိရိစ္ဆာန်များတွင်ရိုးရိုးလေးသာသွေးဆောင်နိုင်သည် တစ်ခုတည်းပရိုတိန်းတိုးမြှင့် ဆုစင်တာ (Deltafosb) အတွင်း။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Dr. Ley မှမသိသေးသည့်တိုင်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများထက်စွဲလမ်းမှု၏ဇီဝဗေဒအကြောင်းကိုလူသိများသည်။
၌ဤအပတ်တွင်ထုတ်ဝေဤစာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားအဖြစ်လေးကိုအဓိကဦးနှောက်အပြောင်းအလဲမူးယစ်ဆေးများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်"စွဲလမ်းမှု၏ဦးနှောက်ရောဂါမော်ဒယ် (2016) မှ Neurobiologic တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ“ အရက်အလွဲသုံးခြင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျုးဒါရိုက်တာဂျော့အက်ဖ်ကိုဘော့နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျုး (NIDA) နော်ရာဒီကော့ကော့တို့ကဤမှတ်သားဖွယ်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုတွင် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြသည်သာမက အပိုဒ်ဖွင့်ပွဲတွင်လိင်စွဲလမ်းမှုရှိကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားသည်။
အာရုံကြောသိပ္ပံက ဦး နှောက်ရောဂါစွဲလမ်းမှုကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကောက်ချက်ချသည်။ ဤနယ်ပယ်ရှိအာရုံကြောသိပ္ပံသုတေသနသည်အရာ ၀ တ္ထုစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများ (ဥပမာ၊ အစားအစာ၊ လိင်နှင့်လောင်းကစား) ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်အခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုပေးသည်။ ”
ရိုးရှင်းများနှင့်အလွန်ကျယ်ပြန့်ဝေါဟာရများအတွက်အဓိကအခြေခံအကျဆုံးဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုနေသောခေါင်းစဉ်: 1) အသိ, 2) Desensitization, 3) Hypofrontality, 4) အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်။ ထိုအဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအားလုံး4porn အသုံးပြုသူများအပေါ် 40 မှ neuroscience လေ့လာမှုများအကြားဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီ
porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက်ာင်းသို့မဟုတ် cue-reactivity ကိုသတင်းပို့လေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက် desensitization သို့မဟုတ်လေ့သတင်းပို့လေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် functioning (hypofrontality) သို့မဟုတ် porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲများတွင်ပြောင်းလဲ prefrontal လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံလေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုသတင်းပို့လေ့လာရေး: 1, 2, 3.
ငါစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာက Dr. Ley ကညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာကိုသိပ္ပံနည်းကျအထောက်အပံ့မရှိဘူးလို့အမြဲတမ်းပြောနေပုံရတယ်။ လေ့လာမှု ၂၂ ခုက porn / sex စွဲလမ်းမှုကိုပံ့ပိုးပေးရုံသာမကကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစွဲပညာရှင်များလည်းပါ ၀ င်သည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမတည်ရှိနိုင်သောနေရာတွင်သူကြံစည်ခဲ့သောပူဖောင်းလေးသည်ချက်ချင်းပင်ဆီလျှော်မှုမရှိတော့ပါ။
ဒေးဗစ် LEY: "ငါ porn အများကြီးစောင့်ကြည့်, သဘောတူ, ရုပ်မြင်သံကြားသို့မဟုတ်အားကစားသင့်ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်ဖွယ်ရှိ IS ။ ဤ "သင်ယူမှု 'ဟုဆိုအပ်၏။"
RESPONSE: ၎င်းသည်ပုံမှန်နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ PTSD သည်သင်ယူခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ဒေါက်တာ Ley သည်တီဗွီတွင်ဘောလုံးကြည့်နေစဉ်လေ့ကျင့်မှုနှင့်လုံးဝမတူသောကြောင့်စစ်ပွဲများဖြစ်ပေါ်စေသော PTSD ရှိအမျိုးသားများအား“ ကျော်ဖြတ်ရန်” အကြံပေးလိမ့်မည်လော။ အဖြစ်မှန် - စွဲလမ်းမှုကိုစွဲလမ်းစေသောယန္တရားများကိုပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနှစ် ၆၀ နီးပါးလေ့လာခဲ့သည်။ ထပ်မံ၍ (ပုံမှန် ဦး နှောက်မှ) ခြားနားချက်များကိုဆယ်လူလာ၊ ပရိုတိန်းနှင့်အက်ပီဂျင်နစ်အဆင့်အထိခွဲခြားထားသည်။
သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အရှိဆုံးဆက်ဆက်နေမြဲနေစဉ် စွဲလမ်းထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်, စွဲအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်အဖြစ်ရည်ညွှန်းရောဂါဗေဒသင်ယူမှုစွဲ၏တစ် ဦး အလွန်တိကျတဲ့အမျိုးအစားပါဝင်သည် "sensitization ။ " ဤလေ့လာမှုတွင်ဆုများ၌ပါ ၀ င်သောစွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြောင်းအလဲများပါ ၀ င်သည်။ The စွဲလမ်း၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ စွဲလမ်း၏မြင်သာထင်သာစံပြဖြစ်ပါတယ်။ ၏ 24 46 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ ဒီစာမျက်နှာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုရှာဖွေခဲ့တယ်။ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24.)
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလေ့လာမှု ၄၄ ခုသည်ညစ်ညမ်း / လိင်စွဲသူများ၏အခြားစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများ (sensitization, desensitization, hypofrontality နှင့် disfunctional stress circuit များ) ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ မဟုတ်ပါ၊ ဒေါက်တာ Ley၊ ဤ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကို“ I Love Lucy” ပြန်လည်ပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ။ အတူတကွဤအမျိုးစုံ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကျနော်တို့စွဲအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသောအရာကိုအဖြစ်အပြုအမူထင်ရှားစွာပြ: 44) အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော ),2သုံးစွဲဖို့ ဆက်လက် ရန် 3) နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကြားမှသုံးပါ ထိန်းချုပ်ရေး အသုံး, 4) တဏှာ - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။
Ley ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူသည်လိင်ဆိုင်ရာပညာရှင် Marty Klein ကaသို့ပြန်ပြောသည့်စကားနှင့်အလွန်ဆင်တူသည် Zimbardo & Wilson ကဆောင်းပါး သူကအခိုင်အမာဆိုဘယ်မှာ porn ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုနေဝင်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ထက်မခြားနားသည်:
အဆိုပါ Ley နှင့် Klein အရေးဆိုမှုကို 2000 fMRI လေ့လာမှုအတွက်ရှည်လျားသောလွန်ခဲ့တဲ့စမ်းသပ်ပြီးနှင့် debunked ခဲ့: "Cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ: neuroanatomical မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအဘို့တိကျတဲ့နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှု။ တစ်ဦးချင်းစီအက်ကွဲကိုကင်း, 1) ပြင်ပသဘာဝမြင်ကွင်းများနှင့် 2) ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဆေးလိပ်) 3: အဆိုပါလေ့လာမှုကိုကင်းစွဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ ရလဒ်: သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ် porn နှင့်ကြည့်တွေကိုကြည့်ရှုသည့်အခါကင်းစွဲနီးပါးတူညီဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများရှိခဲ့ပါတယ်။ porn များအတွက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ (သို့သော်ကင်းစွဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှစ်ဦးစလုံး porn များအတွက်တူညီသောဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများရှိခဲ့။ ) သို့သော်စွဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်ဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများသဘာဝမြင်ကွင်းများကြည့်ရှုသည့်အခါပုံစံများအနေဖြင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်။ နှုတ်ဆက်ပါတယ်ရီစရာစကားမှတ်!
ဒေးဗစ် LEY: "ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျ conservativism ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည်"
RESPONSE: ငါဝေးလံသောလစ်ဘရယ်များနှင့် agonist ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ဒီငါ့ကိုအကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် Ley ၏မှတ်ချက်သည် r / NoFap အကြောင်းရေးသားထားသောစာဖြစ်သည်။ Ley ၏ NoFap ၏နာတာရှည်မှားယွင်းမှုများကိုဆန့်ကျင်လျက်၊ အကြီးဆုံးစစ်တမ်း NoFap အဖွဲ့ဝင်များအပေါ်ကောက်ယူတွေ့ရှိခဲ့:
r / NoFap အဖွဲ့ဝင် 60% ဘုရားမဲ့ဝါဒီသို့မဟုတ်မသိဝါဒီအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်။
r / nofap အဖွဲ့ဝင်များကသာ 11% သူတို့ဘာသာရေးသို့မဟုတ်ကိုယ်ကျင့်တရားအကြောင်းပြချက်များအတွက် porn ဖြတ်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။
ဒေါက်တာ Ley's တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များသည်အချက်အလက်များနှင့်မကိုက်ညီပါ စိတ်ပညာယနေ့တွင် r / NoFap အပေါ်အပိုင်းအစ hit။ Ley တစ်ဘို့နီးပါးကြားဖူးသောအရာသည်, မိမိ NoFap blog post: အောက်မှာမှတ်ချက်များကိုခွင့်ပြုရန်ငြင်းဆန်ကြောင်းသတိထားမိ စိတ်ပညာယနေ့တွင် post ကို။
ဒေးဗစ် LEY: "ငါမကြာသေးမီကနာမည်ကြီး Porn-Related ED အပေါ်အနည်းငယ်လူကြိုက်များအပိုင်းပိုင်းရေးသားခဲ့သည်သူကိုဣဇာက်ကိုအာဗေလ, အင်တာဗျူးဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်နှစ်အကြာမှာတော့သူက porn ကိုစောင့်ကြည့်နေတုန်းပဲမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်နေဆဲ ED နှင့်အတူရုန်းကန်နေရတဲ့"
RESPONSE: အဲဒါတကယ်ကိုဝမ်းနည်းတာပဲ ဒါကညွှန်ပြလိမ့်မည် အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏အားနည်းချက်။ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုပြီးဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးပြီး 2-3 နှစ်လိုအပ်သော erectile health ကိုပြန်လည်ရရှိရန်။ ၃ နှစ်ကြာပြီးနောက်၌ပင်သူတို့သည်တိုးတက်မှုများကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုများကိုလက်လှမ်းမမီသောသက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြန်လည်ရရှိရန်တစ်လနှစ်လသာလိုအပ်သည်။ FYI - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမှပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောမှတ်တမ်း ၄၀၀၀ ကျော်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီလူတွေထဲကတစ်ယောက်ကိုမင်းအင်တာဗျူးလုပ်နိုင်တယ်။
ငါက Ley တစ်ခုတည်း variable ကို (porn ကိုအသုံးပြုခြင်း) ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့် erectile function ကိုနှင့်လိင်စိတ်ပြန်လုလင်မှတ်တမ်းတင်အကောင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏လျစ်လျူရှု, သေးသောလူငယ်လေးကသူ့ ED အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေမရှိသေးပါဘယ်မှာတစ်ခုတည်းဇာတ်လမ်းအတွက်ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးကိုနေရာကြောင်းပြောပြရှာပါ။ ထို့အပြင်များစွာမှတ်တမ်းတင်ပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များခုနှစ်တွင် Ley, ဒီစာမျက်နှာ 120 ကျွမ်းကျင်သူများကကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပါရှိသည် အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။
ဤ ဒါဝိဒ်သည် Ley tweet ပြသ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအထိပုံမှန်ပြုန်းတီးစေသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းစေသောစွဲလမ်းသူအားပြောပြသည်နှင့်အမျှသူ၏အမြင်များသည်ညစ်ညမ်းမှုအပေါ်မည်မျှလုံးလုံးလျားလျားပြောင်းလဲသွားခဲ့သနည်း။
အဆိုပါအထက် Ley ရေခဲတောင်၏ရုံအစွန်အဖျားဖြစ်ပါတယ်။